Mijery ny kalandrie atiny | Martech Zone
Mijery ny kalandrie atiny
Alarobia, Jolay 6, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny bilaogy sy ny media sosialy dia hazakazaka mamorona atiny sarobidy isan'andro ho an'ny mpihaino anao. Ny tanjona dia ny hiteraka fahefana sy atiny ampy ananantsika mpamaky, mpankafy na mpanaraka azy mivadika ho mpanjifa. Elaela izany, indraindray, noho izany dia zava-dehibe ny mitazomana ny tanjona mialoha. Ny fomba iray ahafahanao manao izany dia amin'ny fampidirana kalandrie atiny ao amin'ny rafitry ny fitantanana atiny.
Ny kalandrie atiny dia ahafahanao maka sary an-tsaina ny lahatsoratrao amin'ny ho avy mba hahafahanao mitazona mialoha ny fangatahan'ny tetikadin'ny votoatinao ankapobeny. famintinana tato ho ato dia namoaka kalandrie atiny mahafinaritra izay ahafahan'ny mpandrindra mahazo fomba fijery ankapobeny momba ny atiny - ao anatin'izany ny atiny izay tsy maintsy eken'ny mpitantana. Hitanao fa tsy dia tsara loatra tamin'ny famoahana ny atiny tamin'ny volana lasa aho!
Satria samy manana aho a famintinana bilaogy sy bilaogy WordPress, liana aho raha nisy nanangana endrika mitovy amin'izany amin'ny WordPress… ary manana izy ireo! Io ilay Kalandrie Editorial an'ny WordPress.
Ny Kalandrie Editorial an'ny WordPress dia mamela anao manampy lahatsoratra ary koa misintona azy ireo. Ka raha mpitantana haino aman-jery sosialy tena miasa ianao, dia azonao atao ny mametaka ny kalandrie anao herinandro mialoha ary manome ny atiny ho an'ny mpampiasa anao. Ity dia fitaovana lehibe ahazoana antoka fa manome ny fitakiana tetikady votoaty lehibe ianao!
Tags: Fikarohana momba ny tsena voalohanyfikarohana voalohanytoro-hevitra amin'ny lozisialy
Jolay 6, 2011 amin'ny 7:31 PM
Tsara, nitady fomba hanaovana izany tamin'ny tranokalako wordpress aho. Tsara ihany koa ny tranonkala.